KangaROOS ရှူးဖိနပ်စီးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ - သုံးသပ်ချက်များ
အဓိက > သုံးသပ်ချက်များ > သားပိုက်ကောင်ဖိနပ်ပြန်လည်သုံးသပ် - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
သားပိုက်ကောင်ဖိနပ်ပြန်လည်သုံးသပ် - လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြေရှင်းချက်
Zooba Lee ကတိရစ္ဆာန်ရုံ Zooba Lee ကတိရစ္ဆာန်ရုံ။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် await.zooba lee တိရစ္ဆာန်ရုံကောင်းကင်သည်ပြာပြာကဲ့သို့တောက်ပသည်။
zooba lee zoo မှကြိုဆိုပါတယ်။ သင်မြင်တဲ့အတိုင်း
တကယ်တော့ရက်အတော်ကြာခဲ့ပြီ ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်ခဲ့သောအချိန်က thiiiiiiiiiinnnnngs အသစ်တစ်ခုလုံးကိုအဆင့်အသစ်တစ်ခုသို့ကောက်ယူလိုက်ပြီးသားပိုက်ကောင်လိုပင်ပြုမူသည်ဟုအချို့ပြောကြသည်။
ကောင်းပြီ၊ မင်းဆီမှာအဖြေရှိတယ်. ငါကြမ်းပြင်ကိုဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကြည့်ပါ၊ unboxing ကုထုံးသမိုင်းမှာအထူးခြားဆုံးမိတ်ကပ်ဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒီအချက်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။ JackJump ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြေးပြီး Air Trekkers လို့ခေါ်တယ်။ ပြီးတော့မင်းကဒီအရာတွေကိုသင်၏ခြေထောက်ပေါ်ချည်ပြီးရုတ်တရက်လေထဲနှစ်မီတာထဲကိုခုန်နိုင်လျှင်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာတရဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ပုံပျက်နေတယ်ဟုတ်တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ပြန်ညှိယူလိုက်ပြီးငါတွေးမိသည်။ Amazon မှာလူတစ်ယောက်လိုပဲ၊ ငါရှာမယ်ဆိုရင်ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်၊ ငါမတွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲဒီ့အမွေးအတောင်တွေ၊ ခေါင်းအုံးလေးအောက်မှာရှိနေတာတွေအတွက်ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မယ်။ youtube မှာကြည့်လို့ရမယ်၊ မင်းမှာ flips တွေ Acrobatics လုပ်တဲ့လူအနည်းငယ်ရှိတယ်။ ငါဒါကိုမလုပ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါကဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်ချင်တယ်။
ကောင်းပြီအိုကေ၊ နင်ငယ်ရွယ်တဲ့တံတောင်ဆစ် pads ကိုမင်းကိုပေးခွင့်ပေးပါ့မယ်၊ မင်းဟာမင်းကိုသူတို့ဒီကိုမပေးရင်ပြaနာတစ်ခုပဲ။ မင်းကမင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဘာမှမရှိဘူး၊ တံတောင်ဆစ် pads တွေလိုပဲဒါကတံတောင်ဆစ် pads နဲ့တူတယ်၊ မယုံနိုင်လောက်သောအမြန်နှုန်းဖြင့်လေထဲတွင် ၂ မီတာခုန်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိရမည်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော့် gosh ဒီဟာသတ္တုတစ်ခုလုံးရဲ့လေးလံသောစက်ယန္တရားပါ။ သင် holysmokes တွင်ထည့်ထားသောအလေးချိန်အတန်းပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ ဤအရာများကိုပိုမိုတင်းကျပ်စေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ဟာချောင်ချောင်လည်နေပြီးသင်ကဒီဘောပင်ကိုသင့်အတွက်မှန်ကန်သောအမြင့်သို့ရွှေ့နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုတီထွင်ခဲ့တာကိုသင်မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်လား၊ တကယ်လား။ ငါဒီအရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာကြည့်ရတာကောင်းတယ်။ စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုပဲလိုချင်တယ်။ ဒါက unboxtherapy လူတွေအများကြီးနောက်တစ်ခါကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့။ ဒီစတူဒီယိုမှာသိပ်နောက်ကျသွားပြီ၊ နင်တို့ဆေးလိပ်သောက်သူတွေကိုကယ်ဖို့အတွက် အဟောင်းတွေသင်လိုအပ်လိမ့်မယ်ငါ mandude အကူအညီလိုအပ်တယ်ငါဆိုလိုတာကတစ်စုံတစ်ယောက်၊ မင်းဘာပြောနေတာလဲ၊ ငါ့ကိုရယ်မောမနေပါနဲ့။ ငါအနည်းဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကို orientation လုပ်ဖို့တစ်ခုခုလိုအပ်တယ်။ သင်တစ်နေရာရာသို့ခုန်ချခဲ့သည့်ဆောင်းပါးများကိုသင်မြင်ဖူးပါသလား။ မင်းကငါ့ကိုရယ်နေတာပေါ့ oh dude dude meni ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမြန်မြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်မသေချာဘူးဒါကြောင့်ငါတို့ဒီမှာဒီနေရာမှာတစ်ခုခုကိုသင်ယူခဲ့တယ်။ သူတို့ဟာကြိုးတွေအရမ်းနည်းလွန်းတယ်၊ သူတို့ဒူးအောက်မှာနေရာချသင့်တယ်မင်းငါ့ကိုသိပ်မလေးလွန်းဘူးလို့ပြောနိုင်တယ် ဒါကငါကလှန်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာပဲ။ ငါ dch dum dum dum dum လို့ခေါ်တဲ့ mech စစ်သည်တော်လိုခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအရာတွေကိုလှန်လှောကြည့်နေတဲ့ယောက်ျားတွေအတွက်လှုပ်ရှားမှုအသစ်တစ်ခုကမင်းကိုစတင်ရရှိတာပါပဲ ဤအရာသည်အနာဂတ်စစ်သားတစ် ဦး လမ်းလျှောက်နေသည် (dush dush) နှင့်တူသည်။ ဤအရာများသည်သင်မည်သို့ပြုမူသည်ကိုပိုမိုအသုံးပြုတတ်လာသည်။ ချောချောမွေ့မွေ့လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကုန်စုံဆိုင်သို့ကျွန်ုပ်သွားသောလမ်းသို့ရောက်သောအခါစဉ်းစားပါ။ တစ်ယောက်ယောက်သတိထားမိလိမ့်မယ်ဟဟဒါဒီဖြစ်ကောင်းမကောင်းဘူး။ ဘယ်သူမှထွက်မထွက်ခွာဖို့အကြံပေးတယ်၊
ကောင်းတယ်ဖိနပ်- ငါကိုချစ်တယ်သားပိုက်ကောင်ဖိနပ်။ သူတို့ကအကြီးနဲ့အံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်ကြတယ်အဆင်ပြေ။ ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူသို့မဟုတ်အားကစားရုံအဘို့ကြီးသော။
ယောက်ျားတွေ၊ ငါတို့ရဲ့ထူးဆန်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သားပိုက်ကောင်တွေအကြောင်းပြောကြရအောင်။ သင့်အရေပြားအပိုသည်သင်၏ဝမ်းခလုတ်ကိုမြင်ယောင်စေသည်။ သို့သော်သင်လက်ချောင်းကိုကပ်ပြီးလျှင်သင်၏လက်ကိုဖွင့ ်၍ ဖွင့်နိုင်သည်။ နွေးသွားသည်။ နွေးနေသည်နည်းနည်းချွေးသည်။ အတွင်းပိုင်းရှိလူများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ လှပတဲ့ငါတို့ဂျိုဝီမှာအသားအရေရှိတယ်။ နံရံနံရံနဲ့နံရံတွေကြားမှာသွေးကြောတွေရှိတယ်။ နွေးတယ်။ နို့ပြွန်တွေကြောင့်အစားအစာရှိတယ်။ ပြီးတော့သူကစုပ်နေတယ်၊ ​​အဲဒါကငါ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး၊ ဒါကြောင့်အိတ်တွေကချွေးထွက်လာတယ်၊ သားမွေးထားတာမရှိဘူး။ သူတို့က elastic လိုပဲ။ အမေကနို့ရည်မတူတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးလုံးနဲ့ ဂျိုဝဲလ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ အာဟာရများသည်နို့သီးခေါင်သီးတစ်လုံး၌ဂျူရီနှစ်ချောင်းကိုတစ်ချိန်တည်းထိုးနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပန်းရောင်နည်းနည်း y ရှိသည်။ ကမ္ဘာကြီးသို့စွန့်ခွာသွားသောဖွံ့ဖြိုးပြီးအပြည့်အ ၀ နှင့်တူသည်။ မင်းရဲ့အိတ်ထဲကိုကြည့်ကြည့်ပါ ဦး သင်အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်၌ဂျိုဝီမရှိသောသားငှက်များ၏အိတ်များကိုထိရန်နှင့်ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ t သည်ထွက်လာလိမ့်မည်၊ ထိုခံစားချက်ကိုသူတို့အသုံးမပြုတော့ပါ၊ ထို့ကြောင့်မည်သူမျှမထိသောကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကသင်၏လက်ချောင်းကိုသင်၏ခလုတ်သို့မဟုတ်နား၌ကပ်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒါကထူးဆန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီအမျိုးသမီးမှာဂျိုဝီရှိသည်၊ ဒါကြောင့်သူမအဲဒီခံစားချက်မျိုးကိုဖွင့်ပြီးပိတ်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကိုသူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဒီတော့ Daxon၊ သားပိုက်ကောင်အိတ်တစ်လုံးတောင်ဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲ။ ဤသေးငယ်သောကလေးငယ်သည်သွားဖုံး၏အရွယ်အစားဖြစ်ပြီးမျက်စိကန်း။ ဆံပင်မရှိ၊
အရမ်းပူလွန်းတယ်၊ အရမ်းပူတယ်၊ အရမ်းအေးတယ်၊ ဒါကြောင့်နွေးထွေးတဲ့နေရာတစ်ခုလိုအပ်တယ်။ ဒါကြောင့်မွေးဖွားလာရင် ၃၃ ရက်အကြာမှာမွေးကတည်းကသူရဲ့အမိဝမ်းထဲကနေသူ့အိတ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးအဲဒီမှာနို့ပြွန်တွေအားလုံးရှိတယ်။ နို့သီးခေါင်းတစ်ကောင်ချင်းစီကိုအမြဲတမ်းစုပ်ယူနိုင်အောင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးပါ။ တကယ်တော့သူမွေးဖွားလာရင်နို့သီးခေါင်းနှစ်လပဲကပ်ထားတာဖြစ်လို့သင်ချွတ်လို့မရဘူး၊ ဒီဂျိုးလေးကအိတ်ထဲမှာရှိနေ ရှစ်လကြာသည့်တိုင်သွားဖုံးအရွယ်မှသည်ကြီးမားသောကြောင်တစ်ကောင်သို့မဟုတ်အလတ်စားခွေးအရွယ်အထိဖြစ်သည်။ ခြောက်လကြာပြီးတဲ့နောက်ဒီလူတွေဒစ်ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ အမေဒီမှာနေချင်တယ်။ ဒီနွေးထွေးတဲ့ဟိုတယ်အခန်းကအရမ်းကောင်းတယ်။ မင်းကအရမ်း ၀ မ်းသာနေတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ပြောတာကမင်းသွားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ၊ ငါ့အိမ်ထဲကအဆီတွေများလွန်းရင်မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ငှားခကိုပေးရမယ်။ နွေးထွေးပြီးနွေးထွေးတဲ့အရေပြားထိတွေ့မှုလိုကောင်းတဲ့လုံခြုံစိတ်ချရသောနွေးထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးရင်အဲ့ဒီပacterိဇီဝဆေးတွေကိုပစ္စည်းနဲ့တူအောင်ထုတ်လုပ်ပေးပြီးကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပထမရှစ်လတာကာလအတွင်းသူတို့ဘဝကိုစာသားဖြင့်ရေးဆွဲခဲ့သောဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ကပ်ပါးကောင်များမှဂျိုဝဲလ်သည်မည်မျှကံကောင်းကြောင်းကိုသူတို့မသိကြပါ၊ သူတို့ကအခန်း ၀ န်ဆောင်မှုရှိသော Airbnb နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Uber ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထုအသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အရာဝတ္ထုအသစ်များကိုအနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းများကိုခေါင်းထဲမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြင့်လုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်ဤအိတ်အိတ်၏စွမ်းအားကိုဂျယ်လီယန်အရွယ်အစားမှတင်းနစ်ဘောလုံးအထိမည်သို့မည်ပုံစုဆောင်းသည်ကိုပိုမိုအလေးထားရန်သင့်ဘဝ၌ရှိသူများရှိသည်။ ဖြစ်ပါသည်, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ s ကိုအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ် ဒီ Joey ရဲ့ပုံသဏ္,ာန်တွေ၊ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဟာဂျိုဝီပါဝါအိတ်ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်၊ ဒီဆောင်းပါးကိုတွေ့ချင်ရင်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတယ်၊ ငါတကယ်ကြည့်ကြည့်ရတာပျော်စရာမကောင်းဘူး၊ ယောက်ျားတွေကိုမင်းကပိုသေးတယ်၊ cuter တောင်ပိုတယ်၊ သူတို့ကို Quokkascos လို့ခေါ်တယ်၊ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပြဖို့ညာဘက်ရှိထောင့်ကိုနှိပ်ပြီး Quokka ဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ quokka ဆောင်းပါးများစွာရှိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤဆောင်းပါး၏ကျန်အပိုင်းများမှာကျွန်ုပ်အားပြောပြရန်နှင့်ခေါင်းလောင်းအကြောင်းကြားစာကိုနှိပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤ quoikkas များကမင်းကိုစိတ်ပျက်သွားစေလိမ့်မည်။
ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီအိတ်တွေဟာအေးဆေးနေတယ်၊ ​​ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီအပျော်ရွှင်ဆုံးသတ္တ ၀ ါတွေ၊ သူတို့မှာဒီကောင်လေးတွေထက်သေးငယ်တဲ့သေးငယ်တဲ့ဂျူဝဲလ်တွေတောင်ရှိတယ်။ ဂျိုဝဲလိုအရွယ်အစားကဒီသြစတြေးလျကဒီတိရိစ္ဆာန်တွေအတွက်စိတ်ကိုပေါက်စေလိမ့်မယ်။ အံ့သြစရာကောင်းသည်၊ သင်ကလစ်မနှိပ်ရသေးပါကသင်လုပ်ရမည့်အရာအားလုံးသည်၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤဆောင်းပါး၏ကျန်အပိုင်းများသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အပြီးသတ်သောကြောင့်၊ ယခုသင်ကဘယ်လိုချင်သည်ကိုပိုမိုတိကျသောတိရိစ္ဆာန်ဆောင်းပါးများကိုကြည့်ရန်သင်ကလစ်လုပ်ခဲ့သလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဒါကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့မင်းငါ့အသံကိုမကြားရတော့ဘူး
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပင်လယ်အော်ကမ်းခြေသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ကြိုးစားနေသူများထံမှလမ်းလျှောက်သူများမှယောဂီများအထိမာကြောသောမာရသွန်ပြေးသူများအတွက်တကယ့်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည် လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ခြေလက်တွေကိုဆန့်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ဒီကောင်လေးရှိတယ်။ လူအများစုကငှက်တစ်ကောင်ကိုကြည့်ပြီးလေယာဉ်ပျံကိုမျှော်ကြည့်တယ်ငါကုလားအုတ်ငှက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးလူတစ်ယောက်ပိုပြီးမြန်မြန်ပြေးနိုင်ပုံကိုအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ ငါ့နာမည်ဟာငါတီထွင်သူဖြစ်တယ်။ အနာဂတ်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ် Bonnet Boot တက်သူကိုတည်ထောင်သူ Marin ကောင်တီ၏တောင်ကုန်းများပေါ်၌သူ၏ဘဝကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ငါရွှေဂိတ်တံတားကိုဖြတ်ပြီးပြေးလိုက်တယ်။ ငါပြေးလိုက်တာကတိရစ္ဆာန်ဒါမှမဟုတ်စူပါဟီးရိုးလိုလေထုထဲကိုပြုတ်ကျသွားတာခံစားရတယ်၊ ဒါကဖိနပ်သက်သက်ပါ၊ ဒါက trampoline လိုပဲ၊ catapult လိုပဲ၊ Keahi သည်သူ၏ခြေလက်များနှင့်နယ်နိမိတ်များကိုချဲ့ထွင်ရန်အထူးဂရုစိုက်သည်။
အစပိုင်းတွင်ဘွတ်ဖိနပ်ကိုအမြန်မြေပေါ်မှတိရိစ္ဆာန်များမှအထူးခွန်အားအမြောက်အမြားတွင်သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကိုသိုမှီးထားခြင်းအားဖြင့်စွမ်းအားကိုသိုလှောင်ထားသည့်နောက်ကျောတွင်တင်းမာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်စွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်သည့်နည်းဖြင့်မှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အရိုးနှင့်ရွတ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဇီဝကမ္မဗေဒကိုလိုချင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ဖိနပ်ရဲ့အရှည်ကိုသင်ဘယ်လောက်မြန်မြန်မောင်းနှင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုပိုသိစေမှာပါ၊ ဒီတော့ဒီရွေ့သွားတာကအရှိန်ကိုမြန်စေမှာပါ။ 25 ပေမှ။ မိုင်းသည် ၁၂ ပေမှ ၁ ပေအထိရှိသလား။ ငါသည်ဤတိုးမြှင့်ချင်သောကြောင့်တစ်နာရီလျှင် 45 မိုင်ရှိငှက်ကုလားအုတ်အမြန်နှုန်းရနိုင်။ သူဟာနှစ် ၂၀ နီးပါးကြိုးပမ်းနေခဲ့တဲ့အိပ်မက်တစ်ခုပါ။ ကိုယ့်အသက် ၁၈ နှစ်မှာပထမဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးအယူအဆဟောင်းကိုရယ်ပြီးရှေ့ပြေးပုံစံကိုယ်နှိုက်ကအလုပ်လုပ်မယ်၊ မသိဘူးဆိုတာငါမသိဘူး။ ပြီးတော့ငါကနွေ ဦး ဒဏ်ရာအဖြစ် bungee cordjust ကိုသုံးခဲ့တယ်။ တိုင်းအဆင့်တိုင်းမှာဖမ်းဆုပ်ထားသောပါဝါကိုခံစားရရန်အားရစရာ
အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများပြီးနောက်သူမပြိုလဲ။ သို့သော်၎င်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာတွေ့မြင်နေရသောလမ်းကိုပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သော်လည်းသူသည်ရှေ့ပြေးပုံစံ၏အထွover်အထိပ်ကိုဖြတ်ကျော်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Bionic Boot တက်သည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုမြင်တွေ့ရသည်။ ဒီမှာသင်မြင်နိုင်သော boot ၏အလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်သင်အမှန်တကယ်ရှာဖွေနေသည်။
အစောပိုင်းနွေ ဦး ရာသီ၏ဗားရှင်းများတွင်ဂရွန်ပြွန်များမှပြုလုပ်ထားသောသဘာဝရော်ဘာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော bungee ကြိုးကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဤတွင်သင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤပတ်ပတ်လည်၌ရှည်လျားသောကြိုးကြိုးတစ်ချောင်းမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၌တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ၁၅.၁ လက်မမြေပြင်အထက်ဘွတ်ဖိနပ်ရှစ်ခုက ၂၀၁၄ မှာတောင်အလေးချိန်ထပ်တိုးသည်။ Keahi သည်နောက်ဆုံးတွင်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤသူသည်ငါယနေ့ငါအသုံးပြုသောလက်ရှိရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်သည်။ ပုံစံ ၁၄ ပုံသဏ္withာန်နှင့်အတူတူပါပဲ x14 bionic boot မော်ဒယ်ဖြစ်သည်။ သင် ပိုမို၍ အရောင်တောက်ပသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်၏လုပ်ရပ်ကိုမစွန့်လွှတ်ပဲဖက်ရှင်တစ်ခုကိုတီထွင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေပြီတောင်ပေါ်စက်ဘီးစီးတာကိုအမြှုပ်တစ်ရွက်ပေါ်ပျံပြီးပြီးတော့လူမီနီယံအပိုင်းအစတစ်ခုနဲ့ချိတ်လိုက်တယ် Keahi နဲ့သူ့ဖိနပ်တွေဟာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်နေရာမှာမဆိုဆူညံသံထွက်လာတာကိုအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကစက်ရုပ်ခြေထောက်၏ Sci Fi အစိတ်အပိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း။ လူတွေဟာဖိနပ်ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အားလုံးကမကြိုးစားချင်ကြဘူး။ ဒါပေမဲ့သင်ကြိုးစားချင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်မှာပင်ချက်ချင်း ၀ ယ်ချင်သည်လား? သူသွားလိုသည်။ Bionic boot ၏ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော exoSkeleton ၏အစကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် actuators ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အင်အား (သို့) speed ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကြောင့်အခြေခံအားဖြင့်လူသားတစ် ဦး သည်ပိုမိုလျင်မြန်စွာသွားလာနိုင်သည်၊ စျေးကွက်သို့သွားပါ။ သူ၌သဘောတူညီမှုမရှိသော်လည်းစိတ် ၀ င်စားသူများစွာရှိသောကြောင့်ယခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့်ကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။
သူဟာကမ္ဘာကြီးကိုအမီလိုက်နိုင်ဖို့စောင့်နေရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအိပ်မက်ကိုလိုက်ဖမ်းလိုက်တယ်။ Bionic Boot တက်သူများအတွက်အကျိုးအရှိဆုံးအရာက၎င်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေသည်မဟုတ်လော သို့သော်ကလေးငယ်များသည်စိတ်အားတက်ကြွစေလိုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကိစ္စတစ်ခုသိရန်သိပ္ပံပြပွဲသို့သွားသည်။ ငါ ၁၂ နှစ်အရွယ်မှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပထမဆုံးပုံကြမ်းလုပ်ပြီးသူတို့ကိုအနာဂတ်သိပ္ပံနည်းကျအလုပ်တွေလုပ်ဖို့သူတို့ကိုစိတ်အားတက်ကြွစေလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကိုပြောပြတယ်။ ဒီဟာကအလွန်အေးမြတဲ့အသံလေးပါ။ ချစ်လှစွာသောခန္တီပါရမီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကိုကြိုက်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အောက်ကမှတ်ချက်ကိုချန်ထားပြီး subscribe
အစဉ်မပြတ်တိုးတက်နေတဲ့ inline collection များကိုအပြင်အိတ်ဆောင်နှင့်အတူလုပ်သည်ဂျာမနီမှာပရိုဂရမ်က sneakerheads အများကြီးအတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာ။ ဒေသထွက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တွဲစပ်သောအရည်အသွေးနှင့်ရှားပါးသောပေါင်းစပ်မှုအားအနိုင်ယူရန်ခဲယဉ်းသည်သားပိုက်ကောင်ဆိတ်ကွယ်ရာများစွာသောအခြားအမှတ်တံဆိပ်ကနေ။
တကယ်တော့လူအများစုကသူတို့၏ခံစားချက်ကိုတုပကြသည်ဟုဆိုကြသည်ပြေးtrampoline ပေါ်မှာ။ သူတို့ကမင်းရဲ့ခြေထောက်ကြွက်သားတွေကိုလည်းလေသံပေးတယ်မြန်မြန်နှင့်ထက်ပိုပြီးကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ပြေးinဖိနပ်။ 'ဘယ်တော့လဲမင်းပြေးinသူတို့ကိုသင်ကြွက်သားတွေပိုသုံးတာပေါ့မင်းလိုချင်ပါတယ်ဖိနပ်'Kruper ကဆိုသည်။၁၄ ။ ၂၀၁၀
သားပိုက်ကောင်ခုန်ပြန်ခုန်ထွက်ဖိနပ်များတစ်ခုအံ့သြဖွယ်များနှင့်လုံခြုံချဉ်းကပ်ဖြစ်ကြသည်မင်္ဂလာပါနှင့်အဓိကကြွက်သားအလုပ်။ ၎င်းသည်သင်၏အဆစ်များကိုသက်သာစေပြီးလူအားလုံးအတွက်သင်၏ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်ကြံ့ခိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ။ ဒါဟာအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်ဖို့အပြေးသမားလေ့ကျင့်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ၁.၅ သန်းမှ ၅ သန်းအကြားနူးညံ့သိမ်မွေ့သောမိသားစုကို ဦး တည်သည်သားပိုက်ကောင်ဖြစ်ကြသည်အသတ်ခံရသူတို့အသားအရေသို့လှည့်နိုင်အောင်သားရေမကြာခဏ k- ဟုခေါ်တွင်အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ,သားရေ။ အားဖြင့်ကျယ်ပြန့်သုတေသနသားပိုက်ကောင်PETA Australia မှအသင်း ၀ င်ဖြစ်သောစားပွဲဝိုင်း၏အမှန်တကယ်လူ ဦး ရေမှာ
KangaROOS- မူရင်းဖိနပ်များနှင့်အတူ။KangaROOSနိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်မှဖိနပ်များ၊ အဝတ်အထည်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချသည့်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူနေမှုပုံစံစတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏အားကစားဇာစ်မြစ်ကိုဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ အားကစားအမွေအနှစ်ကိုမူရင်းနှင့်မမျှော်လင့်သောအရာများကိုတသမတ်တည်းတန်ဖိုးထားသည့်အတွေးအခေါ်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
Theအမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှအဆိုပြုထားသောဥပဒေကိုစဉ်းစားနေသည်ပိတ်ပင်ထားမှု၏တင်သွင်းမှုနှင့်ရောင်းချခြင်းသားပိုက်ကောင်အစိတ်အပိုင်းများ။ အကယ်၍ ဥပဒေကြမ်းအောင်မြင်လျှင်၎င်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ ယ်လိုအားကို ထပ်မံ၍ ဖိအားပေးလိမ့်မည်သားပိုက်ကောင်ထုတ်ကုန်များနှင့်အပျော်တမ်းအမဲလိုက်သူများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသော၊
သို့သော်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ၁.၅ သန်းမှ ၅ သန်းအကြားနူးညံ့သိမ်မွေ့သောမိသားစုကို ဦး တည်သည်သားပိုက်ကောင်ဖြစ်ကြသည်အသတ်ခံရသူတို့ဒါအရေပြားသို့လှည့်နိုင်ပါတယ်သားရေမကြာခဏ k- ဟုခေါ်တွင်အဝတ်အစားများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ,သားရေ။ အားဖြင့်ကျယ်ပြန့်သုတေသနသားပိုက်ကောင်PETA Australia မှအသင်း ၀ င်ဖြစ်သောစားပွဲဝိုင်း၏အမှန်တကယ်လူ ဦး ရေမှာ
သားပိုက်ကောင်ဖိနပ်များ ၀ တ်ဆင်ခြင်း၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုနှစ်ပေါင်း ၂၀ လေ့လာခဲ့ပြီးနောက်၎င်းတို့သည်အဆစ်များအပေါ်ဖိအားနှင့်ပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချရန်ကောင်းသောအလုပ်ကိုပြုလုပ်သည်။ ဆွစ်အဖွဲ့ချုပ်နည်းပညာအင်စတီကျု (Institute of Technology) မှလေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရသားရေဖိနပ်သည်သင်၏ခြေကိုမြေနှင့်ထိလျှင် ၅၀% လျှော့ချနိုင်သည်။
Adidas ၏လူကြိုက်အများဆုံးဘောလုံးဖိနပ်ဖြစ်သော Copa သည်သားပိုက်ကောင်သားရေများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည် - သို့သော်သူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်မည်သူ့ကိုမျှမစွန့်ရန်သူတို့ကို“ သားရေ” ဟုခေါ်သည်။ သူကပြောပါတယ်, သားငှက်များငြင်းခုံတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်, အဘယ်သူ၏နံပါတ်များကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်နှစ်ပတ်လည် culling နှင့်အတူလျှော့ချနေကြသည်ပိုးမွှားတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ကြသည်။
သငျသညျအနိုင်နိုင်တစ်မီလီမီတာအထူရဲ့အသားအရေနှင့်အတူခက်ခဲတဲ့ - အဖြစ် - လက်သည်းသားပိုက်ကောင်ရဲဖိနပ်ကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ပေးထားသောကြောင့်လည်းများသောအားဖြင့်ပိုမိုပါးလွှာသည်။ (Cowhide ဘွတ်ဖိနပ်များသည်များသောအားဖြင့် ၁.၄ မှ ၂ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ )